Ferdinand iyo Keown oo 1 laacib u Arka inuu ahaa Ninka ugu Muhiimsan ee Arsenal ay Sanado Badan Sugeysay, waa kuma??
Monday, May 20th, 2019 - 13:36:24
Sunday November 04, 2018 - 13:42:00 in Wararka by Muuse Cabdi
Rio Ferdinand iyo Martin Keown ayaa waxay u arkaan laacibka ugu fiican ee Khadka dhexe ay usoo Heleen kooxda Arsenal laacibka Lucas Torreira kaasoo dagaal adag ku galay Khadka dhexe ee kooxda Gunners ciyaartii Liverpool.
Laacibka xulka Faransiiska Alexandre Lacazette ayaa u suurageliyay Tababare Unai Emery in kooxdiisu ay 1 dhibac ka hesho ciyaartii Emirates keddib markii James Milner uu kooxda martida ah u dhaliyay goolka hore, kaasoo ahaa midkiisii 50-aad ee uu ka dhaliyo Premier League.
Torreira ayaa si weyn sare ugu qaaday Khadka dhexe ee kooxda Gunners wuxuuna ammaan kala kulmay labadaba Difaacyadii hore ee Ferdinand iyo Keown.
Arsenal ayaa soo heshay laacibka dalka Uruguay isagoo Khadka dhexe uga ciyaarayay kooxda Sampdoria iyagoo Suuqii ugu dambeeyay kusoo qaatay Laacibkan, wuxuuna bandhig Cajiib ah ka sameeyay Safka kooxdiisa oo uu maamulkeeda hayo macallinka cusub ee Emery.
‘Waxa uu Torreira garanayo waa Boos inuu ku leeyahay ciyaarta,’ Difaacii hore ee Manchester United iyo xulka England Ferdinand ayaa u sheegay BT Sport.
‘Ciyaartoy badan ayey Booskaas keeneen, balse waxay u ciyaarayeen sida dad metelayaal ah ee aan aheyn kuwa shaqada rasmiga ah laga doonayo. Balse. Torreira waa laacibka ugu dhaqaaqa wanaagsan, kubado gaagaaban ayuuna ciyaaraa.